microsoft office 2007 ရဲ့serial no. — MYSTERY ZILLION
265 Mobile Devlopment
24 other mobile
microsoft office 2007 ရဲ့serial no.
May 2009 edited August 2009 in Sharing
microsoft office 2007 ရဲ့serial no. လေးသိရင်shareပေးကြပါဗျာ
zawmyo wrote: »
ရော့ ......... နောက်တစ်ခါ မပျောက်စေနဲ့........ ထပ်ပျောက်ရင် အရိုက်ခံရမယ်...
thanks par byar
naut ta kar ma pyot say ya par bu bya
dar lae ma ya tay bu tae bya:((:((
စာလုံးအကြီးတွေနဲ့ပဲ သုံးပါ....... အဲ့ဒီမှာ small letter တွေ ဖြစ်နေလို့ပါ......... ဆောရီးပါ....
a kyi bal use tar bar byar
dar pin mae lae ma ya bu tae bya:2:
Capital Letter တွေနဲ့နော်.........
hoke kae par byar
dar lae ma ya tay bu tae byarrrr.:((
ဘယ် edition ကိုမရတာလဲ။ professional လား student လား ဘာအမျိုးအစားဆိုတာပြောပေးပါ\_:D/
အကို .. ကိုဇော်မျိုးရေ .. ဒီဖိုရမ်က burglish သုံးခွင့်မရှိပါဘူးဗျာ .. မြန်မာလို ဒါမှမဟုတ် pure English သုံးပေးပါဗျာ ... ဆက်လက်ဆွေးနွေးပါ .. :103:
oh!i`m very sorry!:77:
ဒီ thread နဲ့တော့မဆိုင်ဘူးဗျ ... ကျွန်တော်တစ်ခုမေးချင်တယ် .. အခု office Mixer ဆိုပြီးထွက်လာတယ် .. ဒီကောင်က office 2007 နဲ့ office 2003 ပေါင်းထားတယ်ပြောတယ် .. ကောင်းတာကတော့ 2003 စက်က 2007 စက်ကပို့လိုက်တဲ့ office file တွေ ကိုဖတ်လို့ရသွားတာပေါ့ .. 07 စက်ဖက်ကလဲ 2003 ဖိုင်ပြောင်းပေးစရာမလိုတော့ဘူးပေါ့ .. Software က 03 and 07 Mixer ဆိုတော့ တအားနေရာယူမလားသိချင်ပါတယ် .. :39:
dar pin mae lae ma ya bu tae bya
ကိုဇော်မျိုးရေ.... MZ မှာ ဘားဂလိပ်ပေးမသုံးဘူးဗျ.... အင်္ဂလိပ်လိုဖြစ်ဖြစ်...ဒါမှမဟုတ် မြန်မာလိုဖြစ်ဖြစ်ဘဲ ရိုက်ရပါတယ်.... edit လုပ်ပေးစေချင်ပါတယ်.. .
၀င်ဆွေးနွေးပေးတဲ့အတွက်..Thankalot ပါခင်ဗျာ....ဘယ်လိုမှ မအောက်မေ့ပါနဲ့.....
sorry ပါဗျာoffice mixer ကိုအခုမှကြားဘူးတာဗျအစကသိရငဧဒါကိုတင်ပါတယ်ဗျာ
စိတ်မပျက်ပါနဲ့ဗျာ .... သူကအခုမှအသစ်ထွက်တာပါ ... ဘာဖြစ်လဲ ... uninstall လုပ်လိုက်ပြီး အသစ်၀ယ်တင်ပေါ့ .. တချပ်မှ ၅၀၀ ပဲရှိပါတယ်
MS Office 2007 Enterprise Edition (Professional)
MS Office 2007 Other Edition
MS Office 2007 Trial
MS Office 2007 Trial Crack
P.S. Trial ဆိုရင် Crack ပါဒေါင်းနော်
အကိုပေးတဲ့trail key ကို ရိုက်လိုက်တော့ရတော့ရတွားတယ်
this modification is not allowed because this selection is locked ဆိုပြီးဘာမှuseလို့မရဖြစ်နေတယ်ဗျာ:106:
ကျွန်တော်ပေးထားတဲ့ Crack နဲ့ရောစမ်းပြီးပြီလားခင်ဗျာ။ Crack လုပ်ပြီးရင်ရနိုင်ပါတယ်။ ရှေ့ပိုစ်မှာ Crack ပေးထားပါတယ်။
exe ဖိုင်ကိုပဲ run ပါ။ တခြားဟာတွေမလိုပါဘူး:D
Microsoft Office Ultimate 2007 SP1 Patch
တခုတောရှိတယ်ခင်ဗျ မိတ်ဆွေရဲ့စက်က vista (သို့) limited user ဆိုရင်တော့ administrator အနေနဲ့ run မှရပါလိမ့်နိုင်မယ်
Phone Activation လဲလုပ်ရပါမယ် ထင်ရာ၊ ရိုက်ချက်ရာ key ကိုရိုက်ပေးလိုက်ပါအကိုရေ ဘာရိုက်ရိုက်ရပါတယ်:D
There are already an update for Office2003 that can read files from office 2007
this is from Microsoft downloads and install.
OFFICE COMPATIBILITY PACK for MSOffice2003
Office 2003 can read office 2007 files and can save as to office 2003 format then it can edit in office 2003. I already know that. Office 2003 and office 2007 can coexist in every computers therefore that office mixer is just telling that it can work office 2003 and offcie 2007 at the same time. what so special I don't know.
ကျွန်တော့pc က vista ဗျ
Right Click > Run As Administrator
အဲမှာ Administrator နဲ့ Run ကြည့်ပါ။ ဒီမှာတချက် ကြည့်လိုက်ပါ။
thanksalot ပါဗျာ:77::77:
ဒီနေရာမှာပဲ ဆက်တောင်းလိုက်တော့မယ်။ Microsoft Office Project 2007 serial လိုချင်လို့ပါ။ အခုလောလောဆယ် trial version ကို သုံးထားပါတယ်။ share ပေးကြပါဦး။ Thanks in advance. :6:
winlwin wrote: »
ကျေးဇူးပဲ ကိုပရင့်စ်ရေ။ Trial ကုန်ရင် စမ်းကြည့်လိုက်ပါ့မယ်။